သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ပပျောက်ရေးနှင့် Victoria အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် မကွေး၊ ပုသိမ်၊ ဘားအံနှင့် လားရှိုးမြို့များမှ ဒေသခံပြည်သူများ ဆန္ဒထုတ်ဖော် - Yangon Media Group
မကွေး၊ ဇူလိုင် ၁၄
သက်ငယ်မု ဒိမ်းမှုပပျောက်ရေးနှင့် Justice for Victoria အမှုမှန်ပေါ်ပေါက် ရေးအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများကို ဇူလိုင် ၁၄ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ပုသိမ်၊ ဘားအံ၊ မကွေးနှင့် လားရှိုး မြို့များ၌ကျင်းပခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ဗစ်တိုးရီးယားအတွက်တရား မျှတမှုရှာဖွေရေးနှင့် ကလေးသူငယ်များအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးပေးရေးအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ ကိုဇူလိုင် ၁၄ ရက် နံနက် ၉နာရီက မကွေးမြို့၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ဒေသခံပြည်သူ ၅ဝဝ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင် မကွေးမြို့ အေးစေတီဘုရားကွင်းမှ အထက(၁)လမ်း၊ ဆေးရုံလမ်း၊ ပြည်တော်သာလမ်းမှ ရွာသစ် (၁၆) လမ်း၊ မဲထီးလမ်းထိုမှတစ်ဆင့် သစ္စာလမ်း၊ ပြည်တော်သာလမ်း အထက (၁)လမ်းမှ အေးစေတီဘုရားကွင်းသို့ လမ်းလျှောက်၍ ဗီနိုင်းဆိုင်းဘုတ်များ ကိုင်ဆောင်ကာကြွေးကြော် သံများကြွေးကြော်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော် ကြသည်။
အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကို မကွေးမြို့ အောင်မေတ္တာရပ်ကွက် နေ ဦးဝင်းလှိုင်မှ သက်ဆိုင်ရာမြို့မ ရဲစခန်းတွင် ခွင့်ပြုချက်တင်ပြ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မကွေးမြို့မှ ဒေသခံပြည်သူ ၅ဝဝ ခန့် ပါဝင် ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
Victoria အပါအဝင် ကလေးငယ်များအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများ ပပျောက်စေ ရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုဇူလိုင် ၁၄ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့ ကမ်းနားလမ်း မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှစတင်၍ လူအင် အား၂ဝဝဝ ခန့်ဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော် ခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။
”ဠငခအသမငေ အပါအဝင်ကလေးငယ်တွေအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှန်တရားပေါ်ပေါက်စေဖို့၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေ ပ ပျောက်စေဖို့၊ တရားဥပဒေစိုးမိုး ရေးနဲ့ ကလေးသူငယ်တွေအတွက် လုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ရရှိစေရေးအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကို ဦးဆောင်သူဦးထွန်းထွန်းဦးက ပြောကြားသည်။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများသည်ကြွေးကြော်သံများကို ကြွေးကြော်ကာ ကမ်းနားလမ်းမြို့တော်ခန်းမ ရှေ့မှစတင်၍ ရွှေစေတီလမ်း၊ ကုန် သည်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှ ဗိုလ်တေဇလမ်း၊ ကမ်းနားလမ်း၊ မကျီးပင်တန်းလမ်းအတိုင်း စီတန်းလှည့်လည်ပြီး နောက်ဆုံးစုရပ်အ ဖြစ် ရွှေစည်းခုံဘုရားရှေ့၌ Victoria အပါအဝင်ကလေးငယ်များ လိင်အကြမ်းဖက်မှုကင်းဝေးစေရေးနှင့် လိင်အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့်အမှုများတွင် တရားမျှတမှုရှိစေရေးအတွက် ဆုတောင်းပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။
ဗစ်တိုးရီးယား ကလေးငယ် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့မှ ဒေသခံပြည်သူအင် အား ၄ဝဝ ခန့်သည် ဇူလိုင် ၁၄ ရက် နံနက် ၉နာရီက ဘားအံမြို့၌ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြကြောင်း သိရ သည်။
”ကျွန်တော်တို့က ဒီကလေးရဲ့ အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားမျှတစွာ ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ အမှန်တရားပေါ် ပေါက်ဖို့ရယ်၊ ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေပပျောက်ဖို့ အခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုပြုလုပ် ရတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆန္ဒထုတ်ဖော်သည့် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကိုသီဟက ပြောကြားသည်။
ဘားအံမြို့မှ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများသည် ဘားအံမြို့နာရီစင် ကြီးရှေ့၌် နံနက် ၉ နာရီတွင် လူစုကာ နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် အဆိုပါ နာရီစင်ရှေ့မှ ထွက်ခွာကြပြီး ဗိုလ်ချုပ်လမ်းအတိုင်း ကြွေးကြော်သံ များကြွေးကြော်ချီတက်၍ ကားဝင်း ဟောင်းအတွင်းအရောက်၌ လူစုခွဲလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)လားရှိုးမြို့ပေါ်ရပ်ကွက် ၁၂ ရပ်ကွက်မှ ဒေသခံပြည်သူ ၁၅ဝ ကျော်သည် ဇူလိုင် ၁၄ ရက် နံနက် ၉ နာရီက လားရှိုးမြို့၌ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုပပျောက်ရေးနှင့် Victoria အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ ကြကြောင်းသိရသည်။
”ကျွန်မတို့ ဒီနေ့ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းကို ပူး ပေါင်းခဲ့တာပါ။ ကျွန်မတို့မိန်းမသားတွေ အထူးသဖြင့်အသက်မ ပြည့်သေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေ၊ သမီးငယ်လေးတွေဘဝ လုံခြုံစိတ်ချတဲ့ အကာအကွယ်ရရှိလိုတဲ့စိတ် ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့လာခဲ့တာ ပါ။ လူအင်အားကိုတော့ သိပ်အားမရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင် အောင်မြင်မြင် လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်”ဟု ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်နှင်းနှင်းက ပြောကြားသည်။
ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများသည် လားရှိုးမြို့ ရပ်ကွက်(၄)၊ မဟာ ဗောဓရုံဘုန်းကြီးကျောင်းရှေ့မှ စတင်ကာ လမ်းမတော်လမ်းမကြီး အတိုင်း ထိုမှတစ်ဆင့် ရပ်ကွက် (၁) တွင်ရှိ ဗျူဟာလမ်းမအထိ လမ်း လျှောက်စီတန်းလှည့်လည်၍ တောင်းဆိုချက်စာသားများပါ ဗီနိုင်းစတေကာများ ကိုင်ဆောင် ကာကြွေးကြော်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ ကြသည်။
'Arthdal Chronicles' ရဲ့ လူကြည့်နှုန်းကို ကျော်တက်သွားတဲ့ 'Hotel Del Luna ' စီးရီး
မင်္ဂလာဈေးကြီး ပန္နက်တင် မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပ၊ ရန်ကုန်ရှိ ဈေးများ အားလုံးကို ဝန်ဆောင်မှုကေ??
လျှပ်စစ်မီး သုံးစွဲသူ ပြည်သူများ ကျေနပ်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီးမှသာ အခြေခံလူတန်းစားကို မထ??